Nidina ifotony ny Governemanta : TSY VAKY I FIHERENA -
AccueilRaharaham-pirenenaNidina ifotony ny Governemanta : TSY VAKY I FIHERENA
23/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy niandry ela fa nandray ny andraikiny avy hatrany ny fitondram-panjakana manoloana tsaho naely fa tondraka ny rano any Toliara II vokatry ny fahavakisan’ny Reniranon’i Fiherena. Ny zoma teo no nidina tany an-toerana ny praiminisitra lehiben’ny Governemanta, Solonandrasana Olivier, niaraka tamin’ny minisitra dimy. Hitan’izy ireo tamin’izany fa diso ny nambara hoe vaky Fiherena, tondra-drano ao Toliara, ary tsy misy trano na iray aza ka simba. Efa hatramin’ny 3 Janoary no nanomboka ny fiavian’ny orana tany an-toerana saingy mbola tsy nisy olona tsy manan-kialofana na rava fananana araka ny voalaza. Miakatra ny haavon’ny rano ao Fiherena saingy mbola tsy nisy fahavakisan’ny renirano. Ilay fahafatesana olona 5 dia tsy noho ny tondra-drano fa noho ny kiry biby izay nataon’ireo olona hiampita ny renirano ka 4 tamin’io olon-dehibe ary 1 no zaza. Lasan’ny rano izy ireo tamin’izany ary tsy hita ny fatiny raha tsy tany amin’ny 60km an’Andranovory izay tanàna misy azy ireo.
Tokony ho mailo hatrany
Miantso ny fahamailon’ny mponina indrindra ny ankizy ny governemanta araka izany satria ny fiakaran’ny rano tahaka izao dia tsy mahazatra. Ny rotsak’orana kosa anefa any amin’ny Faritr’i sakaraha dia mitohy sy mihamafy hatrany. Any moa tsy dia atahorana loatra amin’ny fiakaran’i Fiherena. Nanapa-kevitra ny fanjakana fa omena asa hanao asa tana-maro ny mponina, mba hiarovana ny mety ho fihoaran’ny rano. Ireo toerana mety ahiana amin’ny fahavakisan’ny fefiloha dia efa hita avokoa, izany hoe efa voafehy ny zava-misy. Na izany aza anefa dia ireo tanimbary 800 ha no tena voa mafy amin’izao fotoana izao izay difotry ny rano. Ireo efa voa tamin’ny taona 2013 ihany ireo voa amin’izao fotoana izao ireo. Efa tsy nisy nipetraka ireo toerana ireo satria efa lasa nifindra toerana hafa nanao voly vary, hasy, katsaka. Tokantrano 800, ahitana mponina 2 000 no tratran’izao fahavoazana tsy mahazo vokatra izao. Ho fanampiana azy ireo vonjimaika aloha dia katsaka 8 taonina no nomena ireo mponina ireo. Ankilan’izay dia efa miomana amin’ny fandraisana ireo olona mety ho tratran’ny tondra-drano koa ny Bngrc. Efa nasiana ekipa manokana misahana ny fahasalamana napetraka any an-toerana.
Aerocity Escorts dans Tsy nahomby teto Antananarivo-HAMBOLY KORONTANA ANY MAHAJANGA NY MLE
Aerocity Escorts: *I’d should talk to you here. Which is not some thing I do! I quite like reading a post which…